Shirqol turkiga iyo Qadar wadato oo meesha ka saraysa somaliland kasoo u fulinayo farmajo. W/Q Siyasi axmed maxed Axmed gobonimo
Wednesday July 11, 2018 - 21:59:39 in Wararka by Super Admin
Waxaa dalkena somaliland kabilanay goboladisa iyo casimadisaba dhaqdhaqaqyo lagu hikicinayo dhalinyarada somaliland oo durufo adag oo shaqo laani hayso iyadoo ladonayo indibadaha loo saaro kuwasoo larabo inay kubaxan basaborka somaliya Lana geynayo melo badan oy gadar kamid ta hay sidii qaar horaba logeyay Hadaba. Waa maxay ujedada kadanbaysa dhalinyarada waxaa lagu beraya fikir somaliwayn tasoo larabo inay dalka dib ugusoo noqdan wacyigalin baladhana dhalinyarada usameyan gobaha dhalinyaradu kubadantahay sida hutelada iyo jamacadaha iyo gobaha. Dhalintu kucawayso howshasi waa mid lagu mijo xabinayo qarankan somaliland Hadaba dhaman shacbi iyo xukumadba waa inaynu fojignano farmajo inuu cid inaga soo dhexgaluu ku howlanyahay. Waxana ladonaya melaha aynu ujilicsanahay Arintani halaga tigtonado way jirtaye.